လိင္တံ ၾကီး/ရွည္ ေအာင္လုုပ္လိုု႕ရလား – Gentleman Magazine
လိင်တံ (Penis) ကြီးအောင်လုုပ်လိုု့ရ လား ?
မေးလွန်း လိုု့ ထပ်တင်ပေးလိုုက်ပါတယ်………
ဒီနေ့တော့ သောက်ဆေး တွေ. ထိုုးဆေးတွေ .လိမ်းဆေး . ပန့် တွေရဲ့အားလုုံးရဲ့နောက်က လျှို့ဝှက်ချက် ကိုုဖော်ထုုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ယောကျ်ားလေးတိုုင်း အော ကား ခေါ် “လူရိုင်းကား ၊ အပြာကား” (PORN) ကြည့်ဖူးမယ်လိုု့ ယုံုကြည်ပါတယ်။ ခုုစာကိုု ဖတ်နေပြီဆိုုကတည်း က အင်တာနက်ပေါ် မှာ အလွယ်တကူဝင်ကြည့်လိုု့ရနေပါပြီဆိုုတော့ အကြပ်ကိုုင်ပြီး မေးမနေတော့ပါဘူး။ ကြည့်ဖူးသမျှ အောကား တွေထဲမှာ သရုုပ်ဆောင်တွေရဲ့ လိင်တံ တွေက တော်တော်ကြီးနေတယ် လုုိ့မြင်မိမှာဖြစ်ပြီး အပြင်က တခြားလူတွေကိုုတော့ သွားလှန်ကြည့်လိုု့မရလိုု့ ပုံုမှန် ဆိုုက်က အောကားထဲက ဆိုုက်လိုု့ ထင်မိတဲ့ လူတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ အောကားကြည့်ပြီး ကိုုယ်က ၆ လက်မလောကမရှိရင်ပဲ လူစင်မမှီသလိုုလိုု ခံစားရနေတဲ့လူတွေ အနေနဲ့ နဂိုုရှိတာထက်ကြီးအောင် နည်းပေါင်းစုံုစဉ်းစားမိကြမှာပါ။ အများသောအားဖြင့် အောကားဆိုုက်တွေမှာ ကြီးဆေးတွေ ထွားဆေးတွေ.လိမ်းဆေး. ပန့်တွေ မျိုးစုံုရောင်းချနေတာကိုုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ အပြင်မှာလည်း နေရာအများအပြားမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုုင်ပါတယ်။ တကယ်ထင် ကြီးစေတယ်ထင်အောင်လည်း နည်းလမ်းမျိုးစုံုနဲ့ သရုုပ်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရှင်းဆုံုးပြောရရင် လိင်တံ ကြီးအောင်လုုပ်လိုု့ကိုုမရပါဘူး။
နဲနဲ ရှပ်ရှပ်ပြောရင် လိမ်းဆေးတွေ၊ သောက်ဆေးတွေ၊ ပမ့် တွေ ဆိုုတာ အားလုံုးလိမ်ဆင်တွေ ချည်းပါပဲ။ လွယ်လွယ်နဲ့ဆေးသောက် ဆေးလိမ်းလိုုက်လိုု့ ကြီးသွားတယ်ဆိုုတာ မရှိပါဘူး။
သေသေချာချာနားလည်အောင် ဆေးပညာနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားလာတဲ့ အချိန်မှာ အချောင်းက တောင်လာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုုတော့ အချောင်း ထဲမှာ ပါတဲ့ တစ်ရှူးတွေက လေဘူဘောင်းနဲ့ အသွင်တူပါတယ်။ လေဘူဘောင်းကိုု လေမှုတ်ထဲ့လိုုက်ရင် တင်းကားလာပြီး လေထွက်သွားရင်ပြန်သေးသွားပါတယ်။ အချောင်း ထဲကိုုတော့ လေအစား သွေးတွေ ဝင်ရောက်သွားကာ တောင့်တင်းလာစေပါတယ်။ ဒီတစ်ရှူးတွေက တင်ပဆုံုရိုုးကနေစဖြစ်ပြီး တင်ပဆုံုရိုုးနဲ့ ဆက်နေတဲ့အတွက် လွယ်လွယ်နဲ့ ကြီးအောင်လုုပ်လိုု့ရမှာမဟုုတ်ပါဘူး။ လူပျိုဝင်ပြီး တဲ့နောက်ပိုုင်းမှာ ဆက်လက် ကြီးထွားလာမှာမဟုုတ်တဲ့ အတွက် လူပျို ဝင်တုုန်းက ဆိုုက်က အရှည်ဆုံုးဖြစ်မှာပါ။
ဖီးဆေး တော်တော်များများကတော့ ရှိပြီးသား ဆိုုက်ကိုု ပိုုမိုုကြီးအောင်လုုပ်ပေးတာမဟုုတ်ပဲ နဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကိုု အင်အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပါ။ သွေးများများရောက်တော့ အရမ်းတင်းနေပြီး ပျော့ဖတ်ဖတ်ဖြစ်မနေတော့ပါ။
သတင်းကောင်းကြီး ကတော့ ယောကျ်ားတော်တော်များများက ကြီးအောင်လုုပ်ဖိုု့လုုိအပ်မှာမဟုုတ်ပါဘူး။ ဆေးပညာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ သုုတေသနများ အရ နိုုင်ငံပေါင်းစုံုက ယောကျ်ား အများစုုဟာ တောင်နေတဲ့အချိန် ၅.၁ လက်မ နဲ့ ၅.၈ လက်မကြားမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာရှတိုုက်မှာဆိုုတော့ တော်တော်များများက ၅.၁ နဲ့ ၅.၅ လက်မကြားလောက်ရှိမှာပါ။ ၅.၁ လက်မက မိန်းမတစ်ယောက်ကိုု သာယာမှုပေးဖိုု့အတွက် လုံုလောက်ပါပြီ။ မိန်းမတွေကိုု အိပ်ယာထဲမှာ သာယာမှုပေးဖိုု့ အတွက်က အချောင်းတစ်ခုုတည်းက အဓိကကျတာမဟုုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်အကြိုက် တစ်ယောက်သိဖိုု့ နဲ့ သူဘာလိုုချင်သလဲ ဘယ်လိုုလုုပ်ပေးစေချင်သလဲသိဖိုု့ . အချင်းချင်းအပေးအယူတည့်မှသာ သာယာမှုကိုု အပြည့်အဝ ပေးနိုုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ယောကျ်ားတွေက သာမန်ထက် တော်တော်သေးနေတာကိုု ကြံုုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကလည်း ကြီးနေတာ နဲ့ကြံုရမှာ ထုံုးစံပါ။ သေးနေတဲ့သူတွေ အတွက် တော့ ခွဲစိတ်ကုုသတဲ့ နည်းက တော့ အမှန်ကန်ဆုံုးနဲ့ အထိရောက်ဆုံုးနည်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများ အရ သေးလိုု့ ခွဲစိတ်ကုုသချင်တဲ့ လူအများစုု ဟာ ပုံုမှန် ဆိုုက် ထဲ ဝင်နေတက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုုယ့် ကိုုယ်ကိုု ယုံုကြည်မှုရှိသင့်ပါတယ်။ သင်က သင့်အချောင်းကိုု ရှည်ချင်တယ်ဆိုုရင်တော့ လုုပ်လိုု့ရတာက ချံုရှင်းပေးခြင်းဖြင့် ရှည်တဲ့ အမြင်ကိုု ရမှာဖြစ်ပြီး ၊ ဝိတ်များတဲ့သူတွေဆိုု ဝိတ်ချခြင်းအားဖြင့် ဆီးခုံုက အဆီတွေ လျှော့သွားလျှင်ပဲ အနဲငယ် ရှည်လာမှာပါ။
တကယ်လိုု့ သင့်အချောင်းကပုံုမှန် ရှိတာကနေ ကြံု့သွားတယ်ထင်တယ်ဆိုုရင်တော့ သင့်မှာ ရောဂါ တစ်ခုုခုုခံစားနေရဖိုု့များပြီး ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံုးတိုုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ထိုု့ အတူ နဂိုုထက်ကွေးကောက်လာတာ . ခေါက်ကျိုးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြပြီကုုသသင့်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရ လိုု့တိုုသွားတာကိုု နဂိုုအတိုုင်းဖြစ်အောင် ပြန်ကုုသလိုု့ရပေမယ့် ကောင်းနေတာကိုု ရှည်လာအောင်လုုပ်လိုု့မရပါဘူး။
အကယ်၍ သင်ကကျန်းကျန်းမာမာ ရှိပြီး နေတဲ့ အချိန် စွမ်းဆောင်မှု အားမြင့်ချင်တယ်ဆိုုရင်တော့ အမောခံနိုုင်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုုပ်ခြင်း ၊ အဆီပိုုများမရှိအောင် အစားအသောက်ဆင်ခြင်ခြင်း ၊ အသီးအရွက်များများစားကာ လူကိုု ကျန်းမာစေသောအစားအစာများစားခြင်း၊ သကြားများသော Coke, ကျွဲရိုုင်း များကိုု ရှောင်ကြင်ခြင်း ၊ ဆေးလိပ် ဖြတ်ခြင်း၊ အရက် ဘီယာ ကိုုလျှော့သောက်ခြင်းများ ကိုုပြုလုုပ်နိုုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံုးအနေနဲ့ ကြီးအောင်လုုပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေကိုု မလိုုရင်လုံုးဝမလုုပ်ဖိုု့၊ လိမ်စဉ် တွေဖြစ်တဲ့ ဆေးတွေ ပမ့် တွေကိုု အယုံုမှားမိစေဖိုု မှာချင်ပါတယ်။ ဂေါ်လီထည့်တာတွေ၊ ဆီလီကွန်ထိုုးတာတွေက လည်း ဘေးထွက်ဆိုုးကျိုးများကာ အာရုံုခံ တွေကိုု ထိခိုုက်နိုုင်လိုု့ ကိုုယ်ခံစားရတဲ့ ဖီလင်တွေပါပျောက်သွားစေမှာပါ။ မိမွေးတိုုင်း ဖမွေးတိုုင်း နဂိုု ရှိတာကိုု အကောင်းဆုံုးအသုံုးချနိုုင်အောင် ဆုုတောင်းပေးရင်း …..
မိန်းကလေးတိုုင်း တောင့်တပြီး ယောကျ်ားလေးတိုုင်းအားကျစေဖိုု့
Previous: သူေဌးျဖစ္ရတဲ့ ဒုုကၡ
Next: ဘီယာဘာ ေၾကာင့္ေသာက္သင့္ တာလဲ